Amanyathelo of isiguquli Air Oil isahlukanisi - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
1. Thabatha Iziqulathi Nomgangatho Womoya ingqalelo iimeko eziqhelekileyo, umoya zixinaniswe file isiguquli iqulethe umlinganiselo othile wamanzi kunye oyile ethambisayo xa iqatyiwe, zombini ezo ezingavunyelwanga ngezihlandlo ezithile. Kule meko, hayi nje kufuneka ukhethe isiguquli efanelekileyo, kodwa kufuneka ukongeza ezinye izixhobo unyango post.
2. Khetha isiguquli non-lubricated leyo inokuvelisa ngomoya kuphela ukhululekile oyile. Xa kudityaniswa kunye nokwakha lokuqala okanye lesibini okanye isomisi, lo isiguquli ungenza umoya zixinaniswe nge kungekho oyile okanye emanzini.
3. Ubungakanani wokwaphusa nonyebeleziso bahluka imfuneko client. Xa sithetha nje ngokubanzi, eli umyalelo uqwalaselo: isiguquli + itanki yokugcina umoya + FC centrifugal umahluli oyile-amanzi + refrigerated isomisi umoya + FT lokucoca + FA oil kwenkungu micro lokucoca + (Absorption kuyoma + FT + FH isebenze carbon lokucoca ulwelo.)
4. Le itanki yokugcina umoya bobabo isitya ingcinezelo. Kufuneka ifakwe wevalufa zokhuseleko, yobu- ingcinezelo, kunye nezinye izincedisi nokhuseleko. Xa isixa-mali obhobhozayo umoya uvela 2m³ / min ukuba 4m³ / min, sebenzisa i 1,000L itanki yokugcina emoyeni. Kuba isixa ukusukela 6m³ / min to10m³ / min, khetha itanki kunye nomthamo 1,500L ukuya 2,000L.